Soomaali / Dhammaan Heerarka Waxbarashada Durugsan (Distance Learning)
Click on the topics below to read important information about SPPS Distance Learning at all grade levels.
SPPS Distance Learning Information for All Grade Levels
Isxaadirinta awgeed, SPPS waxay dhammaan ardayda uga baahan doontaa inay macallinka kala shaqeeyaan iyaga oo maalinkaas ka soo jawaabayo farriimaha subaxii la soo geliyo. Farriimaha subaxii waxaa ardayda loo soo gelin doonaa Seesaw (K-2) ama Schoology (3-12). Macallimiintu waxa kale oo ay maalin kasta casharada soo gelin doonaan Seesaw ama Schoology billawga maalinka iskoolka jiro.
Imtixaannada iyo Buundo-siinta
Ba’ada Waxbarashada Durugsan (Distance Learning), macallimiintu waxay eegayaan waxbarasahda ardayda markaasna waxay sharaxaadooda waafajinayaan baahida ardayda. Schoology iyo Seesaw labaduba waxay leeyihiin qaab ardayda loo siiyo dhibcaha ay keenaan waxa kaloo ay ardaydu ka heli karaan jawaabta wixii ay ka heleen shaqooyinkii loo diray. Xoogaa dib u habayn ah ayaa lau sameeyay dhibco siinta iskuulka sare si loo buuxiyo sharaxaadii ka maqnayd dhammaadkii quarter 3. Ardaydu waxay heli doonaa kaadhkoodii warbinta ee caadiga ahaa sannad dugsiyeedka dhammaadkiisa.
Buundooyinka (Grades) Rubuca Saddexaad 6-8
Buundooyinka (Grades) Rubuca Saddexaad 9-12
Anshaxa Wanaagga Qalabka Loo Adeegsado Khadka Shabakada (Internet)
Manhajka SPPS wuxuu casharadiisa ku lammaaneeyaa ama ku lifaaqaa anshax wanaaga qalabka loo adeegssdou khadka shabakada dhammaan heerarka fasalada. Shabakadeena Khadka, SPPS waxay leedaha buugga Anshax Wanaaga Qalabka Loo Adeesado Khadka Shabakadaha oo ay bareyaashu raacaan oo laga helo: website, Digital Citizenship: A Manual for SPPS Educators, wuxuu buugaas bixinayaa tilmmaamaha ba’ada Aqoon Dirrista ama Fogaan Barista aan rabno inaan hergalino. Waxaan qoysaska ku dhiiri galinaynaa inay raacaan oo ka faa’iidaystaan macluumaadka ku lifaaqan linkigaas.
Xafiiska SPPS ee Waxbarshada Luuqadaha-badan waxaa ka go'an inay siiso adeegyo Bartayaasha Ingiriisiga (EL) ilaa inta ugu badan ee suurtogalka ah inta lagu jiro Waxbarashada Durugsan. Qorshayaasha caawinta fasalada Pre-K ilaa 12 waxaa ka mid ah xulashooyinka sida
U meel dayida casharada waxbarashada ee guud si loo haqab tiro baahida ardayd
Bixinta casharo ku baxaya Khadka taas oo ardayda lagu caawinaaya iyada oo casharka loogu jarjaraayo gobol-gobol ama cad-cad ama qayb-qayb waxana cashar kasta laga bixinayaa sharaxaad buuxda
Jadwal u samaynta waqtiga ardaga lagaga saxayo casharaka khadka
Siinta ardayda adeeg toos ah iyada oo loo marinaayo nidaamka waxbarashada sida Schoology ama Seesaw
Hirgalinta looxyo laka doorto (halkaas si ardaydu kala doortaan siyaabo kala duwan oo loo barto fikrad gaar ah) si ay ardaydu ay uga shaqeeyaan himilooyinka barashada luqada
Bixinta isgaarsiin/xidhiidh joogto ah si loo caawiyo ardayda iyo qoysaska
Ardayda Guri la’aanta haysato
Barnaamijka Project REACH waa mid ay bixiso degmada SPPS oo guri-ku-meel-gaar ah lagu caawinayo ardayda guro la’aanta ah si ay ugu xasillaan iskoolka, uguna najaxaan tacliinta caruurta iyo da’yarta. Kooxda Saint Paul Public Schools REACH ayaa la soo xiriirayo qoysaska iyo da’yarta loo garto inay yihii guri la’aan si loola socdo baahidooda iyo xaaladdooda nololeed inta ay xiran yihiin iskoollada. Kooxda REACH wuxuu qoysaska iyo shaqaalahaba ka caawin in ardaydu hesho caawinaadda ay rabaan si ay u helaan adeegyada waxbarashada durugsan (distance learning).
Shaqaalaha barnaamijka REACH waxay mar walba diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan iskoollada iyo hey’adaha si loo garto oo loo xaqiijiyo qoysaska iyo da’yarta ay hayso guri la’aanta si ay u helaan waxyaalaha aasaasiga ah ee loo heli karo. Fadlan akhri spps.org/projectreach wixii macluumaad dheeraad ah.
Waxbarashada Hindida Maraykanka
Waxbarashada Hindida Maraykanka waxay bixin adeegyo dhaqanka ka tarjumayo iyadoo la garab istaagayo ardaydeenna iyo qoysaskooda.
Waxbarashada Hindida Maraykanka waxay ardayda Hindida Maraykanka wax ku bari luuqadda Hindida iyo kooxaha dhaqanka, baarista kolleejada iyo nooca shaqo ee ardayga u habboon, barnaamijka dhaqanka iyo barashada xirfadda bulshada/shucuurta iyadoo lagu baranayo khadka intarnetka . Xafiiska Office of Indian Education wuxuu shaqaalaha SPPS ka caawin xagga tababarka oo wuxuu isku xirayaa ardayda Hindida Maraykanka, qoysaska, iyo degmada SPPS.
Yaa lala Xiriirayaa Si Caawinaad loogu Helo Hawlaha Waxbarashada Durugsa
Qoysaska waa inay toos ul xidhiidhaa macallinka ilmahooda ama ay toos uga raadsadaan cawinaad iskoolka ilmahooda iyada email ama talefoon u diraya.
Barashada Dad la Dhaqanka iyo Shucuurta
SPPS waxay isticmaalaysaa nidaamkeena Barasahda Dad la Dhaqanka iyo Shucuurta (Social and Emotional Learning (SEL) si aan ugu wareegno Waxbarasahda Durugsan. Macallimiintu waxau xooga saarayaan adkaynta SEL ee Xirfadaha Xiriirka, “awooda sidii loo abuuri lahaa loona sii waarin lahaa jiritaankiisa loona dadka ama kooxaha kala isirka duwan ee xiriira fiican leh. Awooda fasiixnimada isgaarsiinta, ismaqal fiican, iskaashiga dadka kale, diidmada duufsiga dadka dhaqanka xun leh, isku tanaasulka khilaafka, iyo raadsiga caawinaada ama bixinta caawinta marka lagaaga baahdo.”
Waxa lagma maarmaan ah si waditaanka xiriirka u dhexeeya shaqaalaha iyo ardayda lana si xoojiyo Iintuu sannad dugsiyeedkeenu dhammanayo laguna sii wadi doono nidaamka Waxbarashada Durugsan. Dhamman ardayda da’kasta waxay ku faraxsannan doona inay arkaan wajiyada macalimiintooda, maqlaana codadkooda lana xriirayaan markasta. Macalimiintu waxay isticmaalayaan Schoology ama Seesaw si ay si horeba u bilaabaan xiriirka ardayda April 6 rdibna ugu bilaabaan fasaladii. Tani waxay caawinaysaa ardayda iyo shaqaalahaba inay bilaabaan joogtaynta inay tikoolajiga siyaabo cusub u isticmaalaan.
Adeegaha Bulshada, La-taliyaha, Adeegyada Caafimaadka
Sahqaalaha Adeegyada Caawinta SPPS waxay diyaar u yihiin inay siiwadaan siinta adeeg tayo sare leh ardayda, qoysaska iyo shaqaalaha isticmaalaya nidaamkeena SPPS ee Wabarashada Durugsan. Iyada oo loo maraayo adeeg toos ah oo ardayda la siinaayo sidloo kalena la iskaashanaayo lalana tashanaayo bareyaasha kale, qoysaska, iyo hawlwadeenada bulshada, waxaan bixinaynaa taagero firfircoon oo jawaab celin leh si loo haqab tiro baahida bulshadeena.
Shaqaalaha Bulsha ee Iskuulku waxay bixiyaan adeeg toos ah oo ay sharaxayaan dad la dhaqanka/shucuurta iyo adeega la talinta ardayda ayna u soo marinayaa nidaam ka fog iyaga oo la kaashanaya bareyaasha si ay u tirtiraan wixii caqabado ah ee hor istaagi kara horumarka waxbarashada ardayga. Adeegayaasha Bulshada ee Iskuulku waxay iyana qoysaska ku xiraan adeeyada bulshada ay qoysasku u baahan yihiin waxayna la wadaagaan bareyaasha iyo qoysaska macluumaadka ku saabsan isdaryeelka iyo caawinta inta uu socdo cudurkan safmarka ah Covid-19.
Lataliyaasha Iskuulku waxay barnaamij bixinayaan adeeg habaysan lehoo ay u marinayaan isticmaalka tiknoolajiyada waxana la taliyaasha barnaamijka iskuulka oo ka soo talo bixinayaa meel fog iyaga oo isticmaalaya tiknoolajiyada talao bixin la mid ah tii caadiga ayad iyaga oo ia ilaalinaaya anshaxa iyo dhaqanka latalinta nidaamyada iskuulka. (American School Counselor Association).
Bukaan eegta Health Start ee iskuulka Como Park Senior High School, Harding Senior High School iyo Gordon Parks High School ayaa sii furnaan doona bixinta daryeelka, caawinta nafaqaynta, caawinta caafimaadka maskaxda barashada caafimaadka int aiskuulku xiran. Bukaan eetooyinku waxay siiyaan dhalinyarada caafimaadka qabta meel ay helaan wixii ay isku ilaalin lahaayeen iyo buuxinta baahida shucuurtooda. Macluumaakdka bukaan eegta waxa laga heli karaa shabakada degmada Coronavirus website, spps.org/covid.
Waxbarashada Baahida Gaarka ah
Ardayda haysata Qorshaha Waxbarashada Qofka u Gaarka ah (IEP) ama Qorshaha Adeega Qoyska Qofka (IFSP)Students with Individual Education Plans (IEP) or Individual Family Service Plan (IFSP) iyo Qorshaha 504
SPPS waxay xaqiijinaysaa, sida ugu haboon ee suurto galka ah, arday kasta naafo ah in la siin doono waxbarashada gaar ah iyo adeegyada la xidhiidha sida ku cad ardayga IEP ama IFSP loogu sammeeyay iyada oo la cugsanayo/raacayo Sharciga Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), ama qorshaha loo sameeyta qorshaha farqada 504. (34 CFR §§ 300.101 ama 300.201 (IDEA), ama 34 CFR § 104.33 (Section 504)).
Waxbarashada Durugsan (Distance Learning), adeega waxbarasahda gaarka iyo caawinta 504 iswada raacitooda waxa la kala dooran karaa sidan hoose:
Wax wada dhigis ama iyada oo casharrada lala diyaarinaayo macallimiinta caadiga ah
Fududayn iyo/ama wax ka badalida casharaka waxbarashada gaarka si loo waafajiyo baahida ardaydada
Ku bixinta khadka casharo la fududeeyay
Nigaamka samaynta jadwalkii ardayga lagu xidhiidhin lahaa casharka
Bixinta adeeg toos sharaxaad toos ah iyo adeeg nasteexo la siinayo ardayda oo loo marinaayo nidaamka isgaarsiinta
Samyta looxyo ay ardayda kala doortaa si ay ugu shaqeeyaan himilooyinkooga
Bixinta xidhiin joogto ah oo la siinaayo qoysaska si loo caawiyo ardayda waxbarashada gaarka ah.
Kooxda IEP ee waxabarshada gaarka ama kulanka qoysaska ayaa qasab ah in la sameeyo. Waxa la heli karaa turjubaan tababaran oo xidhidhinta ka caawiya qoysaska.
Kormeereyaasha Waxbarashada Gaarka iyo Tababareyaasha ayaa caawinaaya shaqaalaha waxbarashada gaarka ah markay dejinayaan qorshaha ama caawinayaan Waxbarashada Durugsan (Distance Learning) ee ardayda waxbarashada gaarka. Wixii xog dheeraad ah, booqo shabakada Office of Specialized Services website.